ShweMinThar: Migraine ခေါ် ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ
Migraine ခေါ် ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ
အများအားဖြင့်​ ၂ နာရီမှ ၇၂ နာရီကြာမြင့်​တတ်​ပြီး ​ခေါင်းတခြမ်းတွင်​ တဒုတ်​ဒုတ်​မြည်​​အောင်​ ကိုက်​တတ်​ခြင်းကို ​ခေါ်သည်​။
ပျို့ခြင်း ၊ အန်​ခြင်း ၊ အလင်း​ရောင်​ကို မခံနိုင်​ခြင်း ၊ အသံ အနံ့တို့ကို မခံစားနိုင်​ခြင်း တို့ပါ တွဲလျက်​ဖြစ်​တတ်​သည်​ ။
​ယေဘုယျ အားဖြင့်​ ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှား မိပါက ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းသည်​ ပိုမို ဆိုးလာ​လေ့ရှိသည်​ ။
​​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ခြင်းသည်​ ပတ်​ဝန်းကျင်​အ​ခြေအ​နေ နှင့်​ မျိုးရိုးဗီဇ တို့ဆက်​စပ်​​နေ​လေ့ရှိသည်​ ။
သုံး​ယောက်​တွင်​ နှစ်​​ယောက်​မှာ မျိုးရိုးလိုက်​ခြင်း​ကြောင့်​ဖြစ်​သည်​ ။
ဟိုမုန်း ​​ပြောင်းလဲခြင်းသည်​ တခုအပါအဝင်​ဖြစ်​ပြီး အရွယ်​မ​ရောက်​​သေးသူများတွင်​ ​ယောကျာ်း​လေးများတွင်​ အဖြစ်​များပြီး သက်​လတ်​ပိုင်းအရွယ်​များတွင်​မူ မိန်းက​လေးများက ပိုအဖြစ်​များသည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ ​ရောဂါဖြစ်​ပွားရသည့်​ အ​ကြောင်းအရင်းကိုမူ သိရှိရခြင်း မရှိ​သေး​ပေ ။သို့​သော်​ ဦး​နှောက်​အတွင်းရှိ ​သွေးမျှင်​​ကြော အာရုံ​ကြော​လေးများ ​ကြောငိ့ဖြစ်​သည်​ဟု ယုံကြည်​ကြသည်​ ။
တစ်​ကမ္ဘာလုံး အ​နေဖြင့်​ လူဦး​ရေ ၁၅ ရာခိုင်​နှုန်း​တွင်​ ​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ ​ရောဂါခံစား​နေရသည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ခြင်းသည်​ အလိုအ​လျောက်​​ပျောက်​ကင်းနိုင်​ပြီး မကြာခဏ အပြင်းအထန်​ ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းကို ခံစားရခြင်း ဖြစ်​သည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်း​ကိုက်​ခြင်းကို အဆင့်​ ၄ ဆင့်​ဖြင့်​ခွဲခြား သတ်​မှတ်​နိုင်​သည်​ ။
🌟 ၁ ။ ကနဦး ​ခေါင်းမကိုက်​မီ အဆင့်​တွင်​ နာရီပိုင်း သို့မဟုတ်​ ရက်​ပို်​င်းအလိုတွင်​ စိတ်​မငြိမ်​မသက်​ဖြစ်​ခြင်း ၊ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်း သို့မဟုတ်​ စိတ်​ကြွခြင်း ၊ စား​သောက်​ချင်​စိတ်​ ပြင်းပြ ခြင်း ၊
​မောပန်းခြင်း ၊ ဇာတ်​​ကျောတက်​ခြင်း ၊ ဝမ်းချုပ်​ခြင်း ၊ ဝမ်း​လျောခြင်း တို့ဖြစ်​တတ်​ပြီး တဦးနှင့်​ တဦးခံစားရခြင်းများ ကွဲပြား​လေ့ရှိသည်​ ။
🌟 ၂ ။ ​ခေါင်းမကိုက်​မီ မိနစ်​ပိုင်းအလိုတွင်​ အာရုံ​ကြော မူမမှန်​မှုများ ဖြစ်​တတ်​​လေ့ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့်​ အမြင်​အာရုံ ၊ အထိအ​တွေ့အာရုံ ၊ လှုပ်​ရှားမှု များတွင်​ မူမမှန်​မှုများ တခုခုဖြစ်​တတ်​​လေ့ရှိပြီး …တချို့သူများတွင်​မူ တခုမက လက္ခဏာ ပြတတ်​​သေးသည်​ ။
အမြင်​အာရုံချို့ယွင်းရာတွင်​ အဖြူ​ရောင်​ သို့မဟုတ်​ အနက်​​ရောင်​ လှိုင်းတွန့်​ ပုံစံလိုင်းဖြင့်​ အမြင်​ အာရုံကို ကွယ်​လာ​လေ့ရှိပြီး တချို့သူများတွင်​ မြင်​ကွင်းတခြမ်း​ ကွယ်​သည်​အထိ ရှိတတ်​သည်​ ။
ဒုတိယအားဖြင့်​ တွဲဖြစ်​​လေ့ရှိသည်​မှာ လက်​​ချောင်း​လေးများ လက်​​မောင်းများတွင်​ စ၍ထုံကျင်​လာတတ်​ကာ နှာ​ခေါင်း ပါးစပ်​အနီးထိ ပြန့်​နှံ့သွားတတ်​​သော ထုံကျင်​တတ်​ခြင်း ဖြစ်​သည်​ ။
တခြားလက္ခဏာ များအ​နေဖြင့်​ စကား​ပြောခက်​ခြင်း ၊ ချာချာလည်​မူး​ဝေခြင်း ၊ တစ်​နာရီ နီးပါးကြာမြင့်​ တတ်​​သော ​ခြေလက်​​ပျော့သွားခြင်းများ လည်းတွဲလျက်​ဖြစ်​တတ်​​ပေသည်​
🌟 ၃။ နာကျင်​ခြင်းအဆင့်​တွင်​မူ ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းသည်​ တဖြည်းဖြည်းဖြစ်​လာတတ်​၍ ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှားမှု​ကြောင့်​ ပိုမိုဆိုးလာ​လေ့ရှိသည်​ ။ ၄၀ ရာခိုင်​နှုန်း​သော သူတို့တွင်​မူ နာကျင်​မှုသည်​ ​ခေါင်းနှစ်​ဖက်​လုံးတွင်​ ဖြစ်​နိုင်​ပြီး ဇာတ်​​ကျောနာခြင်း နှင့်​လည်း ဆက်​စပ်​​နေ​လေ့ရှိသည်​ ။ ​ခေါင်းနှစ်​ဖက်​လုံးကိုက်​​သော သူများတွင်​မူ အမြင်​အာရုံ ချို့ယွင်းခြင်း ၊ ​ခြေလက်​ထုံခြင်းများ တွဲလျက်​မဖြစ်​တတ်​​ချေ ။ က​လေးငယ်​များတွင်​ ဖြစ်​တတ်​​သော်​လည်း ​ခေါင်းကိုက်​ချိန်​မှာ ၁ နာရီထက်​ ပိုမကြာတတ်​​​ပေ ။
🌟 ၄ ။ ​ခေါင်းကိုက်​သက်​သာခါစတွင်​ နာကျင်​ခြင်းအနည်းငယ်​ကျန်​ခဲ့ခြင်း ၊ စဉ်းစား​တွေး​ခေါ်နိုင်​စွမ်း ကျဆင်းခြင်း ၊ နုန်း​ခွေခြင်း ၊ ဗိုက်​​အောင့်​ခြင်း တို့သည်​ ရက်​အနည်းငယ်​ ကျန်​​နေခဲ့တတ်​​သေးသည်​ ။
​ခေါင်းကိုက်​ရခြင်း အ​ကြောင်းအရင်းကို တိကျစွာမသိ​သေး​သော်​လည်း စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်း ၊ စိုးရိမ်​ပူပန်​မှုများခြင်း တို့ကလည်း ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းကို ဖြစ်​​ပေါ်​စေသည်​ဟု ယူဆကြသည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ခြင်းသည်​ တချို့အမျိုးသမီးများတွင်​ ရာသီ​သွေးဆင်းချိန်​ အနီးတဝိုက်​တွင်​ ဖြစ်​​လေ့ရှိပြီး ၊ တား​ဆေး​သောက်​သုံး​နေသူများတွင်​လည်း ဖြစ်​တတ်​​သေးသည်​ ။
၁၂ ရာခိုင်​နှုန်းမှ ၆၀ ရာခိုင်​နှုန်း​သော သူတို့သည်​ အစားအ​သောက်​ကြောင့်​ ဖြစ်​သည်​ဟုထင်​မြင်​ကြ​သော်​လည်း ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းနှင့်​ အစားအ​သောက်​ ဆက်​နွယ်​မှုကိုမူ သက်​​သေပြနိုင်​ခြင်း မရှိ​သေး​ချေ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​​ရောဂါဟု သတ်​မှတ်​နိုင်​ရန်​ အတွက်​ ​ရောဂါလက္ခဏာ ဖြင့်သာသတ်​မှတ်​​လေ့ရှိပြီး ဦး​နှောက်​ဓာတ်​မှန်​ရိုက်​ရန်​ မလိုအပ်​​ပေ ။
​ခေါင်းတခြမ်း​ကိုက်​ရာတွင်​ အလင်း​ကြောက်​ခြင်း ၊ ပျို့အန်​ခြင်း ၊ အလုပ်​​ကောင်းစွာမလုပ်​နိုင်​ခြင်း ၊ ​လေ့လာသင်​ယူနိုင်​စွမ်း ​လျော့ခြင်းတို့တွဲလျက်​ ဖြစ်​​ပေါ်​နေလျင်​ ​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ ​ရောဂါဟု သတ်​မှတ်​နိုင်​သည်​ ။
၁ ။ တဒုတ်​ဒုတ်​ ကိုက်​ခြင်း
၂။ ၄ နာရီမှ ၇၂ နာရီထိ ​ခေါင်းကိုက်​ချိန်​ကြာမြင့်​ခြင်း
၃ ။ ​ခေါင်းတခြမ်းတွင်​သာ ကိုက်​ခြင်း
၄ ။ ပျို့အန်​ခြင်း
၅ ။ ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းသည်​ ထိုသူ၏ လူ​နေမှုဘဝ ကို အ​နှောက်​အယှက်​ ဖြစ်​​အောင်​ဆိုးခြင်း
ဤ အချက်​များမှ အနည်းဆုံး ​လေးချက်​ ရှိလျင်​ ​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​​ရောဂါ ဖြစ်​ရန်​ ၉၂ ရာခိုင်​နှုန်း ​သေချာသည်​ ။
ဤ အချက်​များမှ သုံးချက်​​အောက်​​လျော့နည်းလျင်​မူ ​​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​​ရောဂါ ​ဖြစ်​​ကြောင်း ​သေချာမှုမှာ ၁၇ ရာခိုင်​နှုန်းသာ ရှိသည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​​ရောဂါနှင့်​ ဆင်​တူရိုးမှား ​ရောဂါ တချို့မှာ -
– ဦး​နှောက်​​ဘေးခြမ်းရှိ ​သွေးမျှင်​များ​ရောင်​ရမ်းခြင်း ( အသက်​ငါးဆယ်​​ကျော်​များတွင်​ ဖြစ်​တတ်​ပြီး ​ခေါင်းအ​ရေပြားများ အထိမခံနိုင်​ခြင်း )
– မျက်​လုံးအိမ်​တဝိုက်​တွင်​ အဓိက ကိုက်​​လေ့ရှိ​သော အာရုံ​ကြော​အစုကိုက်​ခဲခြင်း ( မျက်​ရည်​ကျခြင်း ၊ နှာ​ခေါင်းတဖက်​ပိတ်​ခြင်း ၊ မျက်​လုံးအိမ်​ တဝိုက်​တွင်​ ​ရောင်​ရမ်းခြင်းများ တွဲဖြစ်​​လေ့ရှိ )
– မျက်​စိ​ရေတိမ်​​ရောဂါ ( အမြင်​အာရုံ ​ဝေဝါးခြင်း ၊ ပျို့အန်​တတ်​ခြင်း တို့တွဲဖြစ်​​လေ့ရှိ )
– ဦး​နှောက်​အ​မြေး​ရောင်​​ ​ရောဂါ ( ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်း ၊ အဖျား​သွေးရှိခြင်း )
– ဦး​နှောက်​တွင်း ​သွေးယိုစိမ့်​ခြင်း ( ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်း အလျင်​အမြန်​ ဆိုးလာတတ်​ )စသည်​တို့ကိုလည်း ခွဲခြားသိရ​ပေမည်​ ။
​ခေါင်းတခြမ်းကိုက်​ခြင်းကို ​ဆေး ၊ အဟာရဖြည့်​တင်းခြင်း ၊ ​နေထိုင်​မှုပုံစံ ​ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ခွဲစိတ်​ခြင်း စသည့်​ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်​ ကုသ​လေ့ရှိကြသည်​ ။
ကာကွယ်​သည်​ဆိုရာတွင်​ ဖြစ်​ပွားမှု အကြိမ်​ကို ​လျော့နည်း​စေခြင်း ၊ ​အကိုက်​အခဲ ​ပျောက်​​ဆေး သုံးစွဲမှု လွန်​ကဲ ​သော​ကြောင့်​ ​ခေါင်းကိုက်​တတ်​ခြင်း တို့ကို​လျော့နည်း​စေရန်​ဖြစ်​သည်​ ။
– အချိန်​မှန်​ ​စော​စောအိပ်​ခြင်း ၊ အချိန်​မှန်​​စော​စောထခြင်း တို့ပြုလုပ်​ရမည်​ဖြစ်​ပြီး ရုံးပိတ်​ရက်​များတွင်​လည်း အချိန်​မှန်​စွာ အိပ်​စက်​ နိုးထ ရမည်​ဖြစ်​သည်​
– ​လေ့ကျင့်​ခန်းမှန်​မှန်​လုပ်​ခြင်း ..​ကိုယ်​လက်​လှုပ်​ရှားမှု​ကြောင့်​ ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်း ပိုဆိုးလာတတ်​သည်​ ဆို​သော်​လည်း ​အေရိုးဗစ်​ ​လေ့ကျင့်​ခန်း လုပ်​ခြင်းသည်​ ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်း သက်​သာ​စေသည်​ကို ​တွေ့ရသည်​ ။
– အစာကို အချိန်​မှန်​စား​သောက်​ခြင်း
– လမ်းအနည်းငယ်​ ​လျောက်​​ရှိခြင်း
– စိတ်​ငြိမ်း​အေး ​စေ​သော သီချင်းများ နား​ထောင်​ခြင်း
စသည်​တို့သည်​ လည်း ​ခေါင်းကိုက်​ခြင်းကို သက်သာ​စေနိုင်​သည်​ ။
– အတက်​ကျ​ဆေး တချို့​ပေးခြင်း
– beta blocker ​ဆေးများ​ပေးခြင်း
– Triptan ​ဆေးကို ရာသီ​သွေး​ပေါ်ချိန်​ နှင့်​ ​ခေါင်းတခြမ်း​ကိုက်​ ​ရောဂါ ဆက်​စပ်​​နေသူများတွင်​​ပေးခြင်း
– Botulinum toxin ကိုထိုးသွင်း​ပေး ခြင်းတို့ဖြင့်​ ကုသ​လေ့ရှိကြသည်​
Tha Tin Zone
Posted by Alex Aung at 4:05 AM
Labels: Health, ဗဟုသုတ
Second Laptop မ၀ယ်ခင်မှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက...
မြန်မာ့စီးပွားရေး တက်နေလား ကျနေလား?
၀ါဆိုသင်္ကန်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ဆက်ကပ်ခြင်းအကျိုး
ကလေးများကို စာတော်စေတဲ့ အကျင့်ကောင်းများ
က​လေးတိုင်း ​ဖြတ်​သန်းရမည့်​ အဆင့်​(၃)ဆင့်
Asus Zenfone Max Pro : The Best Alternative?
ကျားမရေးရာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု အကြောင်း သိကောင်းစရာ...
အုန်းနို့သာကူပြင် - လက် စမိုင် - ပိန်းဥအော်ကွေ့ကြ...
သင်​သတိမထားမိသည့်​ စိတ်ကျရောဂါ လက္ခဏာ - ၈မျိုး -
" ဗုဒ္ဓတရားနှင့် အဆိုးမြင်ဝါဒ "
ဝက်သားငါးပိချက်ထမင်း - မျှစ်ထမင်းသုပ် - ချင်းထောင်...
Xiaomi Mi 8 Review???
ဆေးလိပ်သမာများအတွက် ကျန်းမာရေး အစားအစာများ
P.R ဆိုတဲ့ Public Relation ဆိုတာဘာလည်း ? ? ?
အရက်၏ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ အပိုင်း (၂)
Cheese Pizza - Pesto Macroni - Aglio Elio Spaghe...
အဖြစ်များတဲ့ သွေးပြန်ကြော အားနည်းခြင်း
🌎 ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘဝဖြစ်စဉ်နေ့စွဲများ 🌎
"လူငယ်နှင့် ခေတ်သစ်ပြဿနာ ၃ ရပ်"
အရက်၏ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များ အပိုင်း (၁)
6 packs Abs အတွက် သိသင့်တဲ့အချက်များ